Izwe lonke uyazi mayelana enhle resort izifunda eCrimea, okuyinto edonsela ezokungcebeleka izivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba. Iningi lazo uncamela ugu lweNyakatho eningizimu-mpumalanga. Elinye lamadolobha engcono, eyaziwa lonke eCrimea - Spa. Impesheni ekamu zezingane yakhoselisa izivakashi e kwamaSoviet. Ngisho nangaleso sikhathi, sasihlangana lapha iholidi ehlobo nemikhaya yabo yonke. Ngakho-ke, kuze kube yilolu suku endaweni oyintandokazi kakhulu olufuna izivakashi abeza njalo ngonyaka eCrimea - Spa.
Lena yindawo enhle esisogwini olusentshonalanga yoLwandle Olumnyama eduze yokungcebeleka efanayo enhle - Feodosia. Kulezi nemizana, abantu babephila ngaphambi kwesikhathi sethu esivamile. Abantu abantu kuphumelele nomunye, wedlula ifa ayisisekelo kanye netinchubo.
Ikhona olunothile kakhulu ezizungezile izindawo ongenakulibaleka enhle eCrimea - Spa. Inhlanganisela izigodi ugu, ethakazelisayo izintaba futhi massifs wentaba-mlilo beckons izivakashi usuzothatha uhambo olujabulisayo. Nansi Karadag - Black Intaba, okuyinto ingenye mlilo wezwe lakithi eminingi yasendulo. yobudala wayo zokhahlamba kusuka eminyakeni million 170 kuya 175. Iphuzu esiphezulu le ntaba-mlilo itholakala ngezithuba 333 amamitha ngaphezu kolwandle.
Half a amawa ikhilomitha ka ohlangothini entabeni ndawonye ne elikhanyayo oluluhlaza amatheku. On wonke eCrimea kuyona idume ngobuhle eziyingqayizivele kwezindawo zawo. Kube babephefumulelwe abaculi abadumile kanye izimbongi. Isibonelo salokhu angumsebenzi umculi Maximilian Voloshin - isithombe, oluveza nasezintabeni eziphakeme. Akumangalisi ukuthi lezi zindawo lapho idluliselwe ngendwangu, ngoba Voloshin wahlala Awukude resort - ekhatsi Koktebel.
Indawo ezithandeka kakhulu we yokulondoloza imvelo kuyinto Karadag yokhalo. Noma ubani ofisa kusukela esiqongweni sentaba inikeza ubuhle umbukwane Otuz Valley. Ukubuyekeza ezihlalweni zobukhosi bethwele nemiqhele Cape Megan ekubambeni wedwa ngokumelene okwenza we umkhathizwe makhulu. On wonke eCrimea kuyona is emithambekeni amahle kakhulu eyaziwa entabeni Karadag. On the ingxenye esiteshini begazi, ungajabulela izibalo zamatshe inkosi nendlovukazi. Nazi Dolphinarium, lapho ahlele ukusebenza amahlengethwa futhi sea izingonyama.
Leli dolobhana ezikhanga kakhulu uphakathi kwalabo abangabizwa ukuziqhayisa amabhishi zikanokusho itshana elingene lonke eCrimea - Spa. Izibuyekezo zezivakashi bencoma wathola okuvelayo ongenakulibaleka, azikhulumele. Nansi indawo lapho ungakwazi ukujabulela ikhefu ithule cwaka futhi inokuthula. Ogwini kule ekhoneni elula ngasogwini amakhilomitha amabili. Park lapho ungabona izitshalo, kukwenza uzizwe ngokwakho oGwini LweMedithera noma oluseningizimu.
Kakhulu ulwazi bazovakashela esiteshini begazi, lapho embukisweni izinhlanzi nezilwane ezihuquzelayo. Ukuze ukubheka abakhileyo Black Sea, akusho ukuthi ungene ekujuleni yayo - nje sukuma uhambe kanye aquarium, lapho zonke izakhamuzi phezu kolwandle.
Yiqiniso, phakathi nemizana eziphansi izivakashi ukuhamba eCrimea - Spa. izindlu lezivakashi ukunikela yokuhlala amasevisi holidaymakers ngoba izindleko zibe nesizotha. Ungakwazi pick up indlu ngentengo ruble amabili namashumi amahlanu ngosuku. Kulokhu, isevisi kanye nomkhathi zihlale ezingeni lelifanele.
Yini enquma izindleko endlini isivakashi edolobhaneni Spa?
Ngesikhathi intengo ehlaselwe ibanga ukusuka olwandle, inhlangano kwamandla, ukuba khona noma ukungabi khona komuntu epaki imoto, kanye ukusondela ukuba isikhungo. Ngokwesibonelo, i-ruble 500 per inkonzo usuku itholakala endlini isivakashi nge epaki imoto at ibanga imizuzu emihlanu ukuhamba olwandle. Ngesikhathi esifanayo ukudla mahamba-nendlwana ukusiza zabo uzobe at esiqokiwe ekhishini ngokuhlanganyela.
Emasayithini ekhethekile kanye nolwazi inthanethi eCrimea nethuba simazi ngamanani angaleso sikhathi, futhi ubhukhe igumbi noma ikamelo ngaphandle labalamuli, futhi kungakho ngaphandle eziseceleni ngokweqile. Ngaphezu isivakashi izindlu endaweni, kukhona amahhotela yesimanje futhi zikhululekile. Kule ndaba, endaweni efaneleka kakhulu yokwenza lonke kubantu nanoma iyiphi imali engenayo - eCrimea, Spa. Izimpesheni esisogwini ogwini kwalesi sigodi, futhi ukubeka izivakashi.
Leli dolobhana resort eCrimea unedumela izindawo ayakufanelekela. Ngokungafani imizi nengqalasizinda athuthukile kanye ukuphila kushesha kangaka lokhu wayelokhu ezithanda ukuthula yemvelo futhi engeyona inkimbinkimbi. Akukona usukhathele ukuza abathandi ubuhle bendalo, ulwandle ecacile futhi uthole umoya ohlanzekile. It ayilokothi iyeke mangaza ngendlela ezolile lempilo yabantu bendawo, izihambi lwabo nomoya wokungenisa izihambi bangempela. Lona lapho uyakhululeka futhi azikhohlwe ezikhathazayo ozungezwe izintaba ngokubabazekayo ngaphansi umsindo apholisayo amagagasi olwandle. Jabulela uhambo lwakho!
Cherry jam: iresiphi ewusizo injabulo omuncu-sweet